Redmi K20 nwere ike ịnya isi ọnụahịa dị oke ala | Gam akporosis
Xiaomi nwere ike buru akara na enye onyinye kacha mma ego na smartphones. Redmi, maka akụkụ ya, ebe ọ bụ na e kere ya n'okpuru nku nke ụlọ ọrụ a, ọ na-agbaso otu usoro ahụ. Ya mere, yana Ihe ngosi RedN 7 O gosila ya, ọ dị n'ahịa iji mebie atụmatụ ọnụahịa nke ndị nrụpụta ekwentị ndị ọzọ guzobere.
El Redmi K20 ga-abụ ngwaọrụ ọzọ nke ụlọ ọrụ ahụ, nke ga-abịa na mbipute Pro.Ọ bụ ezie na anyị ekwuolarị gbasara ngwaọrụ a, anyị ekwughi ihe ọ bụla gbasara ọnụahịa ya ... ruo ugbu a. Ọ ga-adị ọnụ ala! Ka anyị lee ego ole!
Onye na-ahụ maka mkpughe nke ọnụahịa nke Redmi K20 bụ Pan Jiutang, onye nyocha a maara nke ọma si China. Dika odi, site na ntule, o kwuru na ego nke ngwaọrụ ahụ ga-adị n'etiti yuan 2,000 na 4,000, nke sụgharịrị ịbụ ọdịiche sitere na 260 ruo 520 euro.
Redmi K20 ego ekpughere
Na oghere ego a na-ekpuchighị ekpuchi buru ibu buru oke ibu na-akụda mmụọ. Otú ọ dị, ọ bụrụ na anyị ewere ya na etiti, ngwaọrụ ahụ ga-efu ihe dị ka euro 340, nke dị ka ebe kachasị ere ahịa. Ọ bụrụ otu a, anyị ga - eche ihu ngwaọrụ dị elu Snapdragon 855 dị ọnụ ala karịa na ahịa.
N'agbanyeghị nke ahụ, anyị amaghị ma ọnụahịa ahụ ọ ga-emetụta Redmi K20, nke ga-abata na Snapdragon 710, ma ọ bụ K20 Pro, nke ga - eji Snapdragon 855. Nke a bụ ihe anyị ga - amụ maka ya ma emechaa. N'agbanyeghị nke ahụ, a na-enwe ekele maka ozi Pan Jiutang, onye nwere ikike a na-akwanyere ùgwù ịkwatu amụma ya. Ikekwe, ọnụahịa ọnụahịa kachasị ọnụ metụtara maka ịkpụchasị akara, ebe nke kachasị maka Pro dị iche iche.
Na May 28, a na-emepụta mobiles abụọ ahụ. Thatbọchị ahụ, nke dị naanị ụbọchị ise, Redmi ga-eme ka ha mara nke ọma, site na nkọwapụta teknụzụ ha yana njirimara nkọwa nke ọnụ ahịa na nnweta. N'aka nke ya, anyị ga-ekwenye na / ma ọ bụ jụ ụgha niile na asịrị ndị emepụtara na izu ndị na-adịbeghị anya banyere igwe mobiles ndị a, nke ha kwere nkwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Redmi K20 nwere ike ịnya isi ọnụahịa dị oke ala